प्रहरी कार्यालयकै अगाडी पार्किङ गरिराखेको साझा बस तोडफोड, घटना रहस्यमय ! – ebaglung.com
२०७३ माघ ६, बिहीबार १८:५०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
घटना सुनियोजित भएको आशंका:अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई चुनौती !
बागलुङ २०७३ माघ ६ । सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयको आडैमा पार्किङ गरि राखिएको साझा यातायातको ना ३ ख २२१६ नम्बरको साझा बस तोडफोड गरिएको छ । बुधवार काठमाडौबाट यात्रु लिएर बागलुङ आएको सो बस साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको सामुन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मालपोत कार्यालयको बीचमा पार्किङ गरि राखिएको थियो ।
आज बिहान बस काठमाडौँका लागि छुट्नु अघि सरसफाई गर्न बसका कर्मचारी बस भित्र प्रवेश गर्दा तोडफोड गरिएको अवस्थामा देखेपछी उनिहरुले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बुधवारको राति अज्ञात समूहले सो बस तोडफोड गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
साझा यातायातले बागलुङ काठमाडौको सवारी भाडामा २० प्रतिशत कम गरेको ठीक पाँच दिनको राति पार्किङ गरिएको साझा बस तोडफोडको घटना सुनियोजित भएको स्थानीयको अनुमान छ । सुनिश्चित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको साझा बस तोडफोड गरिएको घटना सामान्य नभएको भन्दै स्थानीयले साझा यातायातव्दारा सन्चालित साझा बसको सेवालाई प्रभावित पार्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।
बस भित्र गरिएको तोडफोडको प्रकृतिलाई हेर्दा लुटपाट् वा चोरीको निम्ति नभै साझा बसलाई सन्चालन गर्न नदिने कुत्सित मानसिकताले काम गरेको समाचार श्रोतको दाबी छ ।
प्रहरीले बस तोडफोड गर्नु पछीको बास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर घटनाको छानविन गरी अपराधीलाई कडा कार्वाही गर्नेछ भन्ने कुरामा सदरमुकामवासी विश्वस्त देखिन्छन् ।
रातिको समयमा बसको झयाल फोडी बस भित्रको वाइरिङ तार, सीसी क्यामरा,एलसिडि टिभि,व्याट्री तोडफोड गर्नुका साथै सीसी क्यामराको रेकर्डबक्स (रिसिभर)लगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक अनिल खडकाले बताए । साझा यातायातको बसका सामान तोडफोड गर्ने व्यक्ति वा समुहमाथि खोजी कार्य भईरहेको जानकारी दिँदै प्रनाउ खडकाले बस भित्र रोतो टोपी र टिर्सट समेत फेला परेको बताए । तोडफोडबाट करिव ९० हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरको क्षति पुर्‍याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तोडफोड गरेको घटना रिकर्ड भएको आशंकामा सीसी केमराको रिसिवर साथै लिएर गएको हुन सक्ने र बसका सिटहरुमा पिसाव समेत गरेकाले प्रतिशोध दर्शाएको धेरैको अनुमान छ ।
यसैबिच पार्कीङ गरेको बसमाथि नियोजित रुपमा तोडफोड गर्नु अन्यन्तै दुखद भएको साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले बताए । पछिल्लो समयमा साझा यातायात प्रति आम नागरिकको विश्वास बढदै गईरहको समयमा बागलुङमा यसरी एक्कासी तोडफोड हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पाण्डेले बताए ।
साझा यातायातले आफनो भाडा घटाएको,व्यवस्थित बनाउदै गइरहेको अवस्थामा नियोजित रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि राखिएको बस माथि तोडफोड गर्नु निन्दनीय कार्य भएको उनले बताए । घटनाबारे सत्यतत्य पत्ता लगाई दोषिलाई तत्काल कारबार्हीको दायरामा ल्याउन पाण्डेले माग गरेका छन् ।
गत असोज १६ बागलुङमा साझा यातायातले आफनो सेवा बिस्तार गरेको थियो । यात्रुहरुलाई सहज,सुलभ र सस्तोदरमा यात्रा गराउन आगामी दिन सुविधा सम्पन्न रात्री डिलक्स साझा बस संचालनको तयारी भईरहेको साझा यातायातले जनाएको छ ।
चौबीसै घण्टा प्रहरी तैनाथ रहने सुरक्षा निकायकै सामुन्ने बुधवार राति घटेको यस तोडफोड घटनाका दोषीहरुलाई पक्राउ गरी कार्बाही गर्न प्रहरीलाई चुनौति बनेको छ ।
दुई घरमा आगलागी हुँदा २० लाख रुपयाँको क्षेती !